रेडियोग्राफरदेखि प्रमुखविशेषज्ञसम्म : जसले ३७ वर्ष दुर्गममा सेवा गरे – Health Post Nepal
रेडियोग्राफरदेखि प्रमुखविशेषज्ञसम्म : जसले ३७ वर्ष दुर्गममा सेवा गरे
२०७६ असोज १३ गते १७:४५
स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा गगन थापा थिए, लामो समय दुर्गमका बिताएका डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललाई मन्त्रालयबाट तपाईं काठमाडौं आउनुपर्यो भनेर आग्रह गरियो । तर, डा. प्याकुरेलले सीधै हुन्न भने । किन ? सहकर्मीहरू विभाग र मन्त्रालयका महाशाखा, शाखाका प्रमुख हुन तँछाड–मछाड गरिरहँदा डा. प्याकुरेलले १२औँ तह (विशिष्ट श्रेणी÷प्रमुख विशेषज्ञ) नभई काठमाडौं आउँदिनँ भने । त्यसको एउटै मात्र अर्थ थियो, डा. प्याकुरेलको दुर्गमप्रतिको लगाव । काम गर्दाको आनन्द र सम्मान सधैँ मोफसलमै मिल्थ्यो ।
अस्थायी रेडियोग्राफरदेखि महानिर्देशक र प्रमुख विशेषज्ञसम्मको जिम्मेवारी सम्हालेर ४० वर्ष २ महिना १८ दिन स्वास्थ्यसेवामा बिताएका डा. प्याकुरेल त्यही चाहनाले झन्डै ३७ वर्ष मोफसल÷दुर्गममा रमे । अनिवार्य अवकाशसँगै लामो÷छोटो सहकार्य गरेका सहकर्मीले सोमबार स्वास्थ्यसेवा विभागमा एक समारोहका बीच उनको औपचारिक बिदाइ गरिरहँदा डा. प्याकुरेलको बोलीमा कुनै सेवानिवृत्तपन थिएन । ‘अधिकांश ठाउँमा निर्णय गर्ने तहमै बसेर काम गरेँ, जे जिम्मेवारी पाएँ, त्यहाँ खुट्टा नकमाई गोल गरेँ,’ उनले भने ।
यो विन्दुमा आइपुग्दा उनलाई समग्रमा एउटा व्यक्तिको उपस्थितिले पार्न सक्ने अन्तर र गर्न सक्ने परिवर्तन गर्न सकेँ भन्नेमा सन्तुष्टि छ । पछिल्ला जिम्मेवारी हेर्ने हो भने उनी १८ असारदेखि स्वास्थ्य प्रणालीको प्रमुख कार्यकारी निकाय स्वास्थ्यसेवा विभागका महानिर्देशक थिए । त्यसअघि १२ मंसिर ०७५ मा प्रमुख विशेषज्ञ भएर मन्त्रालय छिरेका डा. प्याकुरेलले बीचको डेढ महिना आर्थिक अधिकारसहितको निमित्तसचिवका रूपमा मन्त्रालय सम्हाले । ‘प्रमुख विशेषज्ञका रूपमा मन्त्रालयलाई नीतिगत दृष्टिकोण दिने र बाटो देखाउने काममा मैले जे गर्न सकेँ, त्यसमा सन्तोष छ,’ उनले भने ।
मन्त्रालयमा लामो समय संगठन संरचना विवादमै बित्यो । स्वास्थ्य संरचनालाई नजिकबाट बुझेकाहरू जिल्लाको संरचना खारेज हुँदा स्वास्थ्य धरासायी बन्छ भन्नेमा चिन्तित थिए । नयाँ मन्त्री आएपछि प्याकुरेलले नै उनको साथ लिएर ३५ बाट ७७ जिल्लामा स्वास्थ्यको संरचना रहने, तालिम केन्द्र, मेडिकल स्टोरसमेत कायमै राखे ।
डा. प्याकुरेलले खास गरी मन्त्रालय र विभागमा बसेर गरेका कामको हिसाब सजिलै देखिए पनि दुर्गममा सेवाप्रवाहको तहमा बसेर गरेकै सेवाका कारण अवकाश हुने दिनसम्म पनि उनलाई लोकप्रिय स्वास्थ्यकर्मीकै रूपमा लिइयो । प्रमुख विशेषज्ञका रूपमा कतिपय अवस्थामा भूमिकाविहीन हुँदा पनि जिल्ला–जिल्लाबाट उनलाई भेट्न आउनेको कमी हुँदैनथ्यो । उनको कार्यकक्ष सधैँ खचाखच हुन्थ्यो । ‘जनस्वास्थ्य कार्यकर्ता, डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी जोसुकै जहाँबाट आए पनि सबैले मलाई अभिभावक नै मान्थे,’ उनी भन्छन् । यस अर्थमा ३५ हजार कर्मचारी रहेको स्वास्थ्यसेवामा डा. सुशीलनाथलाई कमै स्वास्थ्यकर्मीले मात्र सर भनेर सम्बोधन गर्थे, अधिकांशले उनलाई दाई भन्थे र मान्थे पनि ।
संविधानमा स्वास्थ्य मौलिक हकका रूपमा स्थापित भए पनि जनस्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्यका ऐन बनाउने कुराको अर्जेन्सीबोध सिस्टमबाट उनीले गराए र सफलता पनि मिल्यो । आधारभूत स्वास्थ्यसेवा तोक्ने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । विकास समितिहरू खारेज हुँदा स्वास्थ्यको एजेन्डाले राजनीतिक तरंग ल्याउँदा उनले नै त्यो चाहिन्छ भनेर लडे र कायमै पनि भयो ।
डा. प्याकुरेलले पुर्याएको सेवा र दिन सक्ने योगदानलाई मनन गरेर पछिल्लोपटक मन्त्रालयले विशेषज्ञ सेवाका लागि उनको सेवावधि एक वर्ष थप्न प्रस्ताव पठाए पनि समयमा निर्णय आएन । अझै पनि उनी औपचारिक रूपमा अवकाशपत्र बुझाइएका छैनन् ।
डा. प्याकुरेलको चार दशकभन्दा लामो स्वास्थ्यसेवायात्राको सुरुवात ४ असार ०३६ मा अस्थायी एक्स–रे प्राविधिकका रूपमा मेची अञ्चल अस्पताल भद्रपुरबाट भयो । ०३७ मा उनी स्थायी भए । प्राविधिकका रूपमा सेवासँगै डाक्टर पढ्ने रहर र प्रयत्न जारी थियो । प्राविधिक डा. प्याकुरेलले ०४० मा महाराजगन्ज चिकित्सा क्याम्पस (आइओएम) मा एमबिबिएस पढ्नका लागि नाम निकाले । एमबिबिएस सकेपछि पनि सेवा गर्ने ठाउँ त सरकारी नै थियो । एक वर्षको इन्टर्नसिपपछि ०४५ मा उनी भोजपुर अस्पताल पुगे । ०४७ मा लोकसेवामार्फत स्थायीमा नाम निकाले । पाँचजना चिकित्सकका लागि दरबन्दी खुलेकोमा उनको नाम ३ नम्बरमा निस्कियो । त्यसपछि पहिलो पोस्टिङ दोलखाको जिरी अस्पतालमा भयो । त्यति नै वेला दोलखामा जनस्वास्थ्य कार्यालय बन्यो । उनले दोलखाको पहिलो जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख भएर काम गरे ।
डा. प्याकुरेल ०६९ मा आन्तरिकतर्फको खुला प्रतिस्पर्धाबाट ११औँ तहमा नाम निकाल्न सफल भए । ११औँ तह भएपछि जिल्ला चहार्ने यात्रा क्षेत्रतिर सर्यो । सुरुमा उनले मध्यपश्चिम क्षेत्रीय निर्देशनालय सुर्खेतमा एक वर्ष काम गरे । त्यसपछि पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयमा ३ वर्ष र सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयमा क्षेत्रीय निर्देशकका रूपमा अढाई वर्ष नेतृत्व सम्हाले । सुदूरपश्चिम बस्दाबस्दै डा. प्याकुरेलको १२औँ तहमा बढुवा भयो । त्यसपछि अवकाशनिकटको यात्रा उनले देशभर डुलेर बटुलेको अनुभवलाई सानै तहमा भएपछि पोलिसीमा उतारेर कार्यक्रममा लागू गरे ।
उनले ०५१ मा थाइल्यान्डको मेदन विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्तिमा एक वर्ष एमपिएच गर्ने अवसर पाए । जनस्वास्थ्य पढेर फर्किएपछि ०५४ सम्म उनले तेह्थुम अस्पतालमा काम गरे । यसबीचमा उनलाई राजधानी र मन्त्रालय विभागका धेरै ठाउँमा सरुवा हुन अफर आए । तर, उनी जिल्लामै रमाए । उनले कहिल्यै दुर्गम, सुगमका आधारमा कार्यक्षेत्र रोजेनन्, सरकारले जहाँ खटायो, त्यहीँ पुगेर र चुपचाप सेवा गरे । ०५४ देखि ०६१ सम्म नुवाकोट स्वास्थ्य कार्यालय र अस्पताल प्रमुख भएर बसे । ०६२ देखि ०६३ सम्म उनले त्यसरी नै प्रमुख भएर गोरखाको जिम्मेवारी सम्हाले । त्यसपछि बल्ल उनको नवौँ तह हुने पालो आयो । बढुवापछि उनी संखुवासभाको खाँदबारी जिल्ला अस्पतालमा प्रमुख भएर गए । केही महिनामै तनहुँमा सरुवा भयो । ०६४ देखि ०६९ सम्म तनहुँमा बसे ।
डा. प्याकुरेल उमेरहदले रिटायर्ड त भए, तर टायर्ड भने भएका छैनन् । ४ दशकभन्दा लामो समयसम्म सिस्टममा डुबेर, डुलेर भोगेका अनुभवले उनी परिपक्व भएका छन् । आगामी दिनमा पनि उनी त्यो अनुभवलाई नीतिमा रूपान्तरण गर्न सरकारले लाए–आराएको काम गर्न तत्पर छन् । उनले सरकारी सिस्टमबाहिर रहेर काम गर्दा पनि त्यसको अन्तिम परिणाम त स्वास्थ्य क्षेत्रमै आउने हो । ‘मलाई विकसित र अल्पविकसित देशको नीतिमा रहेको ग्याप हटाउन अझै काम गर्न पुगेको छैन, अब पनि त्यतै सक्रिय हुन्छु,’ उनले अवकाशपछिको योजना सुनाए ।